Waxgaradka Ku Nool Muqdisho Oo Soo Dhoweeyay Howlgalada Ay Wadaan Ciidamada | Radio Muqdisho	Friday, May 24th, 2013	Bogga Hore
Waxgaradka Ku Nool Muqdisho Oo Soo Dhoweeyay Howlgalada Ay Wadaan Ciidamada
Published on July 7, 2012 by Canab · 1 Comment · 1,965 views
qaar ka mid ah nabadoonada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyay howlgalada ay ciidamada sida wadajirka ah uga wadaan dagmooyin ka mid ah Gobolka Banaadir.
Wax garadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa soo dhoweeyay howlgalada ay wadaan ciidamada XDS iyo nabad ilaalinta midowga Africa ee AMISOM kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay kawadeen dagmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho.
Nabadoon Shire Faarax oo ka mid ah nabadoonada Soomaaliyeed oo la hadlayay Radio Muqdisho ayaa sheegay in howlgalada ay wadan ciidamada uu yahay mid loobaahnaa wax weyn ka badalidoona amaanka magaalada Muqdisho.
Nabaadoonka ayaa dowladda ka codsaday in dhaqan celin lagu sameyo dhalinyarada ka tirsan kooxda shabaab maadaama ay yihiin kuwo la qalday.
sidoo kale Shire Faarax ayaa ugu baaqay ciidamada in ay balaariyaan howlgalka ilaa laga sugayo amaanka gobolka banaadir iyo gobolada ku dhowdhow si ay shabaab ugu soo dhaxdhuumaan dadka shacabka.
saciid macalin says:	July 7, 2012 at 6:59 pm	Asc waan taagersanahay hosha amanka lagu sugaayo mana,ogolaandono Qas danbo iyo rabshado kadhaco caasimadda somalia aloow no dhameystir nabadda noso iftay amiin somalia hanolato amin